18 Zvinhu Zvorudo Zvingaitwa muVancouver, BC
Nzira Yokushandisa Nayo Nguva Yakanaka Neye Waunoda
Paunofunga nezvenzvimbo dzorudo zvikuru munyika, Paris, Roma, kunyange neNew York City inogona kuuya mupfungwa, asi pane zvakawanda zvokuita muVancouver kunotsvaga kana kudzorera rudo.
Kunyange zvazvo pfungwa dzese dzezuva rakasiyana dzichisiyana, nemhando dzakasiyana siyana dzemabasa ekuita muguta guru reBritain Columbia, kune chimwe chinhu kuti munhu wese afare.
Pasinei nokuti iwe uri kupemberera zuva rekuyeuka, zuva rekuberekwa, kana Zuva raValentine , kuronga kurongedza, kana kungozvitsvaga zuva rekusika, nzvimbo idzi dzichakupa mamwe mazano makuru.
Farai Nemaonero Asingaoneki
Florian Trojer / Getty Images
Tora rudo rwako kune zvitsva! Nokuda kwechiitiko chinoshamisa chekuda kwako, shandisa maonero anoshamisa pamwe chete paGungwa ku Sky Gondola muScamish.
Uine maziso eeshiri weHowe Sound, zvinotyisa zvipfeko izvo zvinoita kuti iwe uone mafungiro anofadza, uye Sky Pilot Suspension Bridge, iwe uye wako wekuda adrenaline zvechokwadi uchange uchiputika.
Vhura gore rose, vashanyi vanogona kuramba vachidziya nekufara kunononoka, uye chando chando munguva yechando uye gomo rega yoga, kukwira mabwenga, mazhenje akasununguka, nezvimwewo munguva yezhizha.
Bike Vancouver's Famous Seawall
Biking ihurukuro (kana, yakadhura-mari, kana uchida kukwereta imwe) basa iro vakawanda vakaroorana vanoda kuita pamwechete. Iyi inzira inoshamisa yekuona guta kana nyika uye yakatsigirwa kukupa iwe mose endorphin kukurudzira.
Nzvimbo dzinoshamisira mabhasi dzinosanganisira Vancouver Seawall , kana chero ipi zvayo yemigwagwa inofadza iri muguta rose, kusanganisira Central Valley Greenway, Stanley Park, uye Sunset Beach.
Iwe unogona kutora bhajiki yeTandem kuBayshore Bike Rentals paDenman Street uye unoshanda pakuvandudza unyanzvi hwako hwokugadzirisa matambudziko, pamwechete.
Famba Pedyo neGungwa paSunset
Nguva yakareba inofamba pamahombekombe inogadziriswa nokuda kwechikonzero: vanhu vazhinji vanofarira kutora kufamba kwemafambidzani nevanodikanwa avo vane chiedza chegoridhe chekuvira kwezuva kumanzwi emafungu anononoka.
Izvi zvisingabhadhari uye zvekuda zvekuita zvinogona kuitwa pane imwe yezvikepe zveVancouver zvakanakisisa zvinosanganisira Spanish Banks Beach Park, Kitsilano Beach, uye Sunset Beach Park.
Dya paElegant Restaurant
Kutendeseka kweBacchus Restaurant
Kudya kunze kune chokwadi kune rimwe zuva, asi ine zvikafu zvakawanda zvekudya muVancouver, chokwadi inzira inonaka yekuwana rudo.
Zvimwe zvemavara akanaka zvekudya kwema candlelit zvinosanganisira Lupo iyo inonyanya kugadzirwa neItaly uye yezvokudya zvinogadzirwa nemidziyo, Bacchus Restaurant & Lounge inozivikanwa nemabiko avo anononoka evevelvet, runako rwemvura, Five Sails, uye yeClassic favorite, Le Crocodile.
Endai Mukufurisa Kwewaini
Kutendeseka kweVancouver Urban Winery
Kune vakaroorana vanoda shamwari dzavo newaini yavo, kunwa waini kana kutasva ndiyo mamiriro akakodzera. PaVancouver Urban Winery, unogona kunakidzwa newaini yavo makumi matatu nemasere pamapopu, kusanganisira iyo yakaitwa mumba-winesheni pamwe nekusarudza kushandura kubva kune vavakidzani vemunharaunda kuBritain Columbia. Iyo winery inopawo sarudzo yezvokudya uye doro, uye kune vakaroorana vanoda kuda kudzidza pamwe chete, kune yakakurumbira svondo reSvondo School, uko David Stansfield naLake Cook vanogara vachifarira misangano.
Dzoka neVanDusen Botanical Garden
Kutendeseka kweVanDusen Botanical Garden
Mufambiro wakanaka unomirira nguva imwe neimwe, paVanDusen Botanical Garden , iyo inofadza mumwaka wose uye ine mazamu akawanda uye nzira dzakasununguka kuitira kuti iwe unogona kubva kumapoka evanhu.
Iyo munda inobhadhara mari yekugamuchira, asi kana uri kutsvaga basa rekusununguka, tarisa chimwe chezvinhu izvi zvakanakisa zveVancouver gardens kusanganisira Rose Garden paStanley Park uye Quarry Gardens paE Queen Elizabeth Park .
Tora Skate Date paRobson Square
Ratidza unyanzvi hwako hwekucheka kwechando paRobson Square Ice Rink. Vhura zuva rega rega (kuvhara mazororo mashomanana makuru) kubvira pakutanga kwaDecember kusvika pakupera kwaFebruary, rink iyi iri musha uye iri mumoyo weDowntown Vancouver.
Iyi rink yakavharidzirwa yakavharidzirwa inosvinura zvakare uye inobata zviitiko zvakasarudzwa nemimhanzi inoratidzika uye laser chiedza chinoratidza.
Kurara Pasi Penyeredzi
Pane chimwe chinhu chinoratidzira rudo pane kuisa nyota here? Kana iwe unofarira nzvimbo yakakura kunze, rambai hotera inodhura uye urovere pasi penyeredzi pane imwe nzvimbo dzakaisvonaka uye dzakanaka dzeVancouver kudzika musasa , kusanganisira mabwande ejecha ePoriseise Bay paSunshine Coast, uye Porteau Cove ine zvivako zvakakosha zvevamwe scuba , kana iwe uchikwira kune imwe nzvimbo.
Inwa & Dhaniza usiku
Kutendeseka kweThe Diamond
Vancouver's nightlife scene ine chimwe chinhu kune vose vakaroorana, kubva kune dzimwe nzvimbo dzakagadzirwa nerecktail bars kusvika kune makambani ekudhanha akazara.
Netsitsi Yiso Rheyo / Hero Hero Mifananidzo / Getty Images
Imwe nzira inodhura yakawanda yokudyira kunze iyo inenge isati iri yerudo ndeyekugadzira picnic pane imwe yemapaki eVancouver . Gadzira pikini yako nebhazikoro kana kufamba kwezuva rakakwana rerudo.
Endai Kunzvimbo Yakanaka Yokunze Kunze Pamwechete
Ziplining muVancouver uye Whistler imwe nzira yekuwedzera shomanana adrenaline kuhukama hwako. Kunewo Perfect Day Experiences, kambani inopa maitiro akasiyana-siyana ezvimwe zvikwata zvinogona kuitika iwe unogona kuita nemumwe wako, kusanganisira kubhururuka, scuba diving, kayaking, chikepe, uye mhepo yemhepo, uyewo zvidzidzo zvemitambo zvisina kujairika, kufanana nechekuEurope kuvhara.
Ongorora Vancouver Art Gallery "Nokupa" - Chipiri Chipiri
Chipiri Chepiri, kubva pa5: 00 - 9: 00 masikati, Vancouver Art Gallery haina mari yekugamuchira; "nemupiro" pane. Nepo kwete kune munhu wese, vanodikanwa uye vanodikanwa netsika vachawana ichi chimwe chezvinhu zvinotyisa zvikuru kuVancouver.
Tarisa Zuva Rinobva Pakudya Kwemanheru
Kutenderera kweHort Cruises
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kudiwa muVancouver ndechekuona zuva richivira pamusoro pemakomo eNorth Shore kubva mumvura. Makambani maviri emakwikwi anonyanya kufambiswa mumakwikwi eVancouver anopa kudya kwemanheru uye zuva rinokonzera cruise ndiHort Cruises uye Accent Cruises.
Vhura Up for the Theater, Symphony or Opera
Kufanana nezvose zvePacific Northwest, Vancouver, kazhinji, iguta risina kupfeka. Nepo iwe usingafaniri kupfeka kuti uende kunzvimbo yemitambo , Vancouver Symphony Orchestra (VSO) kana Vancouver Opera, iwe unogona-uye iwe haungazonzwi kunze kwekuita uchidaro.
Gadzira Pamwe Chete, Motokari Yakashongedzwa neHira muStanley Park
Frank Pali / Getty Images
Stanley Park Horse Tours inozivikanwa nokuda kwekufamba kweboka kwepaki, asi vanobhadharawo voga, motokari dzakatasva mabhiza kune vakaroorana (kusanganisira kuroorana). Iwe unogona kusarudza "Cinderella Pumpkin Coach!"
Iri pedyo nemaminitsi makumi matatu kuchamhembe kweguta reVancouver, Deep Cove nderimwe yenzvimbo dzakanakisisa muK BC Kayak pamwe chete uye kuona nzvimbo inonakidza nemhuka dzesango.
Dhani paRobson Square - July naAugust Only
Zvose zhizha, Robson Square anoisa dhani pasi pamusoro peqirini rink uye inoita zviitiko zviviri, zviitiko zvekutamba pasina: Chishanu usiku ballroom kutamba kubva DanceSport BC uye Svondo Manheru Salsa. Zvose zviitiko zvakasununguka kumunhu wose pasinei nehutano uye zvinosanganisira chidzidzo, kushanda, nenguva yekudha pamwe nemumwe wako waunosarudza.
Kutaura kune mumwe wako ndeyechokwadi chezvinhu zvakanakisa zvekuita muVancouver, uye Vancouver ine nzvimbo dzakawanda dzakashamisa, dzakasiyana-siyana kupikisa mubvunzo iwoyo, kusanganisira atop Grouse Mountain, pamakungwa ari oga (kufanana neWreck Beach ), uye pamberi pezvakanaka zvevistas .
Vancouver muna April Weather and Event Guide
Ronga Rudo Rwako Rwokuda Kuenda kuVancouver, BC
Kusununguka Kwezhizha Kwezhizha muVancouver, BC
Nyorera kuLynn Canyon Park & ​​Suspension Bridge muVancouver, BC
Insider Guide kuPacific Centre Mall muDowntown Vancouver
Danish Nyika Yenyika uye Masvingo - Gungwa Rokudzoka kuCopenhagen
Kwatinoona Kuwa Kwemavara muNortheast USA
Mafirimu EpaIndaneti Mazoratidzwa
Mabhiza Anopfuura Mawaini MuWashington, DC
15 Zvikonzero Louisville Ishamisa
Kwatingaona Mhuka dzeMhuka nePoni dzeSouth-Southeast
Zvose pamusoro peOhio: Chokwadi, Zvimwe, uye Kufara
31 Nzvimbo dzeku Play Quizzo muPhiladelphia
Ariel Anofambidzana Nenzira Inofadza
National Harbor Fireworks paGaylord National Resort
Best Bradley Airport Parking Options: Paki uye Fly kubva kuHartford
Chikonzero Nei Usingafaniri Kushandisa Packages kune Munhu Wose Chete Paunofamba
Ocean Park Muvakidzani muSan Juan
9 Nzira Dzose-Nzira dzekudzivisa Kurwara paChirungu